सौन्दर्यप्रति युवा-युवतीहरुमा विशेष चासो र आकर्षण बढ्दो « News24 : Premium News Channel
सौन्दर्यप्रति युवा-युवतीहरुमा विशेष चासो र आकर्षण बढ्दो
आकर्षक देखिने रहर कस्लाई हुँदैन र ? त्यसमाथि सडकमा हिड्दा कसैले हेरोस भन्ने चाहना कस्को पो नहोला र ? यस्तो रहर युवतीहरुमा मात्र नभई युवाहरुमा पनि उत्तिकै देखिन थालेको छ । व्युटी पार्लर धाउने युवती हुन् या हेण्डसम पार्लर धाउने युवाहरुको जमात बढ्दै जाँदा फिट एण्ड फाइनको सुत्र अंगाल्दै फिटनेस् सेन्टर जानेहरु पनि उत्तिकै भेटिन थालेका छन् ।
महिला र पुरुषको सौद्धन्यर्तालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं उपत्यका मात्र नभई देशका प्रमुख शहरहरुमा आजभोलि बग्रेल्ती खोलिएका छन् – व्युटी तथा हेण्डसम पार्लर र फिटनेस सेन्टरहरु । त्यस्तै कपाललाई चाहे जस्तो बनाउन हेयर सैलुनहरु पनि प्रशस्त खोलिएको पाइन्छ । काठमाडौंमा खोलिएका यस्ता धेरै सैलुनहरु मध्ये एक हो हेयर एण्ड शान्ति सैलुन । जहाँ मुलुकका लब्ध प्रतिष्ठितदेखि नाम चलेका सेलिब्रेटीहरु पुग्ने गरेका छन् ।
झण्डै १५ वर्ष अघि देखि यसै क्षेत्रमा समय विताएका हरिकुमारको आफनो सौन्द्धर्यमा विषेश ध्यान दिन र अहिलेको मौसम परिवर्तनको समयमा विशेष गरि आफनो सौन्द्धर्यतामा ध्यान दिनु सुझाव छ । आफ्नो सौन्द्र्धयमा विशेष ध्यान दिनेहरु हेयर एण्ड शान्ति सैलुनमा निरन्तर पुग्ने गर्छन ।
हरेक उमेरका मानिसहरु आफ्नो उमेर अनुसारको गेटअपमा सजिन चाहन्छन् । आकर्षक व्यक्तित्व बनाउन लागि पनि सौन्द्र्धयको विशेष ध्यान राख्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । हेरक पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई अहिले सौन्द्धर्य सजाउन लागि खोलिएका पार्लरहरुले तान्दो छ ।